Tata-drano eto an-drenivohitra Betsaka ireo tsy misarona, lasa fanarian’ny olona fako
Betsaka ireo tata-drano tsy misarona intsony eto an-drenivohitra nefa antonona olona iray ny habeny. Faritra maro no ahitana izany toy ny eny Soanierana, Andavamamba, 67 ha….
Zary lasa fanarian’ny olona fako fotsiny izy ireny, indrindra fa ny tavoahangy plastika, ny baoritra, misy hatramin’ny fatin’alika aza. Tsy mahagaga raha tsentsina vetivety ny tata-drano raha vao avy kely ny orana. Ireo mponina eny amin’ny faritra iva no tena mahita faisana miaraka amin’ny maloto….Antso avo no hatao amin’ny tompon’andraikitra mba hijery ireo tata-drano tsy misarona eto an-drenivohitra. Tokony hosaronana mba tsy hanome fakam-panahy ny olona amin’ny fanariana fako. Ankoatra izay dia mety hamandrika olona ihany koa ary mety hamoizany ny ainy mihitsy ny fisian’izy ireny mandritra ny fotoam-pahavaratra ka mila fandraisana fepetra hentitra. Ireo zokiolona sy ankizy madinika no tena ahiana mafy.